Ady kalitaon'ny valim-pikarohana Google | Martech Zone
Alatsinainy, Aogositra 15, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
SEO.com dia namoaka sary momba ny ezak'i Google hanome valiny fikarohana avo lenta. Fijerena mahaliana ireo hetsi-panoherana lehibe nataon'i Google hiadiana amin'ny tranokala amin'ny valim-pikarohana manjaka tsy mendrika. Na dia mety tsy dia hisy vokany eo aminao aza izany, dia misy tokoa. Ny fiantohana fa ny tranokalanao na ny tranokalan'ny mpanjifanao dia manaraka ny fanao tsara indrindra amin'ny motera fikarohana dia tsy maintsy atao.
Ity ny famafana ny tantara avy ao amin'ny SEO.com lahatsoratra:
Fanavaozana ny Panda (Febroary 2011) - Notapahin'i Google ireo toeram-pambolena sy tranonkala misy atiny ambany sy ambany na manify. Ny fifantohana dia napetraka tamin'ny atiny sy atiny tsy manam-paharoa. Tranonkala maro no voakasiky ny fanavaozana. Voadona mafy ny ankamaroan'ny toeram-piompiana votoaty. Ny fanavaozana ny Panda dia navadika tamina dingana maromaro nandritra ny taona.
Fanavaozana ny Mayday (Mey 2010) - Google dia nandefa fanavaozana izay mifantoka amin'ny fifamoivoizana amin'ny rambony lava.
Fanavaozana ny kafe (Aogositra 2009) - Ny fanavaozana dia mifantoka amin'ny fotodrafitrasa hahafahan'i Google manovo fampahalalana tsara kokoa amin'ny Internet, ary manao izany haingana kokoa. Nanampy tamin'ny fanodinana lalina kokoa izy io, izay namela an'i Google hitondra valin'ny karoka mifandraika kokoa. Ity fanavaozana ity tamin'ny farany dia namela an'i Google hampiditra ny hafainganan'ny pejy ho laharam-pahamehana.
Fanavaozana ny Pluto (Aogositra 2006) - Ny fanavaozana dia mifantoka amin'ny backlinks notaterin'i Google. Tsy nisy fiovana lehibe teo amin'ny valin'ny motera fikarohana.
Big Daddy (Febroary 2006) - Nifantoka tamin'ny rohy miditra sy ivelany i Google. Ireo tranonkala izay manana fitokisana ambany dia ambany amin'ny rohy, na mifandray amin'ny tranokala spam maro dia nahita pejy nanjavona tamin'ny index. Ireo tranonkala Spam dia navadika ho sokajy fanampiny amin'ny valin'ny karoka. Ireo mpampiasa dia nahatsikaritra fa na dia taorian'ny nanarahana ny fanampian'i Google aza dia mbola nameno ny tranonkalany.
Fanavaozana Jagger (Oktobra / Novambra 2005) - Namporisika ny mpampiasa hanome ny heviny momba ny tranonkala mampiasa tetikady SEO hat mainty i Google mba hilahatra tsara. Ireo tranonkala izay hita fa nampiasa teknika toy izany dia nesorina tamin'ny valin'ny fikarohana. Google dia nanadio ny olana kanonika ary nifantoka tamin'ny maha-zava-dehibe ny fampifandraisan-davitra.
Fanavaozana Allegra (Febroary 2005) - Ezaka nataon'i Google hamantatra ireo tranokala spam izay mbola nahavita nitana toerana ambony tamin'ny valin'ny fikarohana. Google dia nangataka tamin'ny mpampiasa mba hanome valiny momba ny tranonkala izay mendrika ny laharana ambony kokoa nefa tsy nandray azy ireo. Nitaraina ireo mpampiasa fa nanjavona tamin'ny valin'ny fikarohana ny tranokalan'izy ireo ary misy toerana sasany spam mbola milahatra tsara.
Fanavaozana ny Bourbon (Mey 2005) - Google dia nandefa ity fanavaozana ity ho valin'ny fitarainan'ny spam sy ny fangatahana fampidirana azy ireo indray. Ny fanovana stratejika ny fizotrany dia nampiharina mba hahomby kokoa. Ny fanavaozana koa dia nifantoka tamin'ny famindrana ireo ivon-drakitra taloha ka hatrany amin'ireo vaovao.
Fanavaozana ny Brandy (Febroary 2004) - Nantitranterin'i Google bebe kokoa ny teny toy ny fahatokisana, fahefana ary laza. Ny fanavaozana dia naneho fa ny fanomezana fampahalalana mifandraika no lakilena. Nisy lanjany lehibe kokoa ny kalitaon'ny atiny ao amin'ny tranonkala. Google dia nanamafy ihany koa ny maha-zava-dehibe ny Latent Semantic Indexing.
Austin Vaovao farany (Janoary 2004) - Ny fanavaozana dia nifantoka tamin'ny fomba fanao antsoina hoe Google Bombing, izay nanodinkodinan'ny olona ny rafitra hamoahana valiny diso. Ny fifantohana dia nifindra tany amin'ireo tranonkala misy hakitroky ny teny fanalahidy faran'izay kely sy fampifandraisana tsara. Ny rohy mifandraika dia nomena lanja kokoa noho ireo tranonkala izay nifandray tamin'ny tranokala hafa amin'ny indostria mitovy amin'izany dia nahomby kokoa tamin'ny valin'ny fikarohana.
Vaovao farany any Florida (Novambra 2003) - Ny fanavaozana dia hita taratra ny fiovan'i Google avy amin'ny sivana tsotra ho amin'ny fanandramana hahatakatra ny sahan-kevitra ny haben'ny fikarohana sy ny valin'ny fikarohana mety ho azo. Ny fanavaozana dia nanadio ny spam tamin'ny alàlan'ny rohy tsotra sy ny fiasa hafa izay nanome lanja bebe kokoa an'ireo tranonkala voatsara sy voadio tsara. Niarahaba ny fanavaozana ny webmasters ary nasehony fa manome ny laharam-pahamehana ho an'ny tombontsoan'ireo mpikaroka i Google. Ny fanavaozana dia fanandramana famporisihana ireo tranokala satroka fotsy, izay manaraka ny fepetra takiana kalitao.
Fanavaozana an'i Esmerelda (Jona 2003) - Ny fahatelo amin'ny andiam-panavaozana izay nanome ny safidin'ny pejy izay manome fampahalalana manokana kokoa ho an'ny mpitsidika. Ny fanavaozana dia nanambara fa ny pejy anatiny ao anaty tranokala iray dia mety misy ifandraisany tsara amin'ny fanavaozana Dominic, izay toa manome ny safidin'ny pejy fandraisam-bahiny na dia ny fikarohana tadiavina amin'ny fangatahana manokana aza. Notaterin'ny mpampiasa fa ny spam dia ambany noho ny taorian'ny fanavaozana Dominic sy Cassandra.
Fanavaozana Dominic (Mey 2003) - Ity fanavaozana ity dia nomena anarana taorian'ny trano fisakafoanana pizza any Boston izay notsidihin'ny mpanatrika PubCon matetika. Ny fanavaozana dia nifantoka tamin'ny fanaovana ny lohahevitry ny fizotran'ny fikarohana ary ny fampifandraisana ivon-data amin'ny fikarohana manokana. Ny fanavaozana dia nanazava fa ny foibe angon-drakitra tsirairay dia natao hanao zavatra samihafa.
Vaovao farany an'i Cassandra (Aprily 2003) - Ity fanavaozana ity dia nifantoka tamin'ny maha-zava-dehibe ny anaran-tsehatra. Ny hevitra dia ny tokony hifidianan'ny orinasa anarana iray izay taratry ny anaran'ny fonenany.
Fanavaozana ny Boston (Martsa 2003) - Ny fanavaozana an'i Boston dia nifantoka tamin'ny rohy miditra sy atiny tsy manam-paharoa. Ny valiny dia ny webmaster maro no nitatitra ny fihenan'ny backlinks ary ny fidinana mifanaraka amin'ny PageRank.